Farmaajo Waxa uu I Baray Macnaha BTJ ! | Xaqiiqonews
FikradahaFarmaajo Waxa uu I Baray Macnaha BTJ !
Farmaajo Waxa uu I Baray Macnaha BTJ !
Run miyaa Farmaajo in uu Jaceylka aad ugu dheereeyo? run miyaa farmajo in uu dhaqan geliyey maah maahdii aheyd “been ku soo xero gili run ku dhaq”, halkani waxa aan kaga doodi doonaa casharada aan bartay intii Farmaajo xilka haayey.
Fasalkii koowaad ee iskoolka waxa aan ku soo bartay sida loogu dhawaaqo loona qoro xarafaha BTJ, laakiin hadda waxa aan baranayaa macnaha dhabta ah ee erayadan ay xambaarsanyihiin. Mahadsanid Farmaajo adiga ayaa si fiican ii baray, casharkii ay horay iigu dhigeen xasan Shiikh iyo Shariif .
B, waxaa laga soo gaabiyey Been
Kama wado farmaajo kaliya ayaa been noo sheegay, laakiin waxaan filayaa in aadan igu diideynin Farmaajo in uu yahay madaxweynihii ugu balan qaadka fiicnaa, waa taas sababata, madaama madaxweynayaasha balanqaadyadooda oo dhan uu been yahay, qofka ugu balan qaadka badan waxa uu noqonayaa qofka ugu BEEN BADAN.
Saaxib, ii sheeg balanqaad uu Farmaajo fuliyey, waxaan kuu sheegi doonaa 5 balanqaad oo uusan fulinin, waxaana hubaa in aan kaga badin doono xujada noocaas ah.
T, waxaa laga soo gaabiyey “Tuhun”.
Maamulka Farmaajo waxa uu kaga duwan yahay kuwii isaga ka horeeyey, sida loo adeegsado kalimadda “tuhun”, marar qaar waan ku amaani karnaa in aysan “wax walbo iska aaminin”, balse waxa aan aad uga soo horjeeda “tuhunka” xad ka baxa ah.
Hadii aadan aqoonin waxa laga wado “tuhun” soo weydii Jawaari oo xilkiisa tuhun ku waayey, waxaan filayaa in lagu tuhmay in uu Imaaraatka la shaqeeyso.
Hadii wali aadan si fiican u fahmin, tusaale fiican waxaa kaga filan Kheyre oo xilkiisa ku waayey markii lagu tuhmay in uu mucaaradka la shaqeeyo.
Kuma eedeynaayi farmaajo maxaad wax u tuhuntay, waxaan ku eedeynaa sababta uu uusan u kala soocin labada kalmadood ee kala ah tuhun iyo kalsooni.
Kuma eedeynaayi Farmaajo maxaad isku difaacday oo aad u fulisay maah maahdii aheyd “biya inta aysan ku soo gaarin iska moos”, , waxa aan ku eedeynayaa maxaad marada u ceshan weysay oo aad u xasuusan weysay maah maahdan “gaalka dil gartiisana sii”.
J, Waxaa laga soo gaabiyey Jaceyl
Ma ogtahay madaxweyne maxamed Farmaajo in sidoo kale loogu yeeri karo “Maxamed Jaceeloow”, sababtoo ah inta uu farmaajeysan yahay iyo inta uu jaceelowsan yahay waa kala dhig.
Ma rabo madaxweynaha in aan ku sharciyeyo eedeynta ku aadan in uu jecelyahay Itoobiya, si qoraalka uusan nooga dheeraan waqti uma haayno soo qaadasha ficilada Farmaajo oo runtii inta badan ku saleysan jaceyl iyo caadifad.
Waxaan ku soo gabagabeynaa , Farmaajo naguma cusbeen oo horay ayaan u aragnay, maxaa yeeelay farmaajayaal kale ayaa jira oo magacyo kala wata sida Xasan Shiikh iyo Shariif, laakiin su’aasha ugu muhiimsan waxa ay tahay: maxaan filan karnaa 8 Febraayo 2021? ma in farmaajahan la doortaa? mise in farmaajayaashii hore la soo celiyo? ma dhici kartaa in isbadal cusub dhaco? Aniga ma ogiyee adiga ma ogtahay?. aan aragno wixii dhaca